पुरानो स्मार्ट फोन बेच्ने सुरमा हुनुहुन्छ ? होश गर्नुस् यस्तो हुन सक्छ... - Everest Dainik - News from Nepal
पुरानो स्मार्ट फोन बेच्ने सुरमा हुनुहुन्छ ? होश गर्नुस् यस्तो हुन सक्छ…
काठमाडौं । के तपाईं आफ्नो पुरानो स्मार्टफोन बेच्न चाहनु हुन्छ ? त्यसो हो भने बेलैमा होश पुऱ्याउनु भएन भने तपाईंले डिलिट गरिसकेको भए पनि मोबाइलमा रहेको डाटा छोट्ने सम्भावना हुन्छ ।
अचेल किसिम किसिमका डाटा रिकभरी गर्ने सफ्टवेयर उपलब्ध छन् जसको प्रयोगबाट कसैले पनि डिलिट गरिसकेको डाटा पुनः प्राप्त गर्न सक्छ ।
अचेल मानिसहरू फोनमा बैंक खाताको पिन नंबर, डेबिट या क्रेडिट कार्डको विवरण, इमेल पासवर्ड आदि सुरक्षित राख्ने गर्दछन् । यस्ता जानकारीहरू सार्वजनिक भएको या चोरी भएको खण्डमा ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस सावधान ! राति मोबाइल साथमा राखेर सुत्दा खतरा
अब पुरानो फोन बेच्नु परे के गर्ने त ? कसरी आफना गोप्य विवरण चोरी हुनबाट बचाउने ? यसका लागि पनि व्यव्यस्था गरिएको छ । यदि हामीले आफ्नो फोनबाट सम्पूर्ण विवरण पुनः प्राप्त गर्न नसकिने गरी अर्थात रिकभर नहुने गरी मेटाउन मिल्छ। र, यसो गरेको खण्डमा डाटा चोरी हुनसक्ने भयबाट मुक्त हुन सकिन्छ।
यसको लागि फोनलाई इनक्रिप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा उपलब्ध अधिकांश स्मार्ट फोनहरू गुगलको एंड्रोइड अपरेटिंग सिस्टमबाट चल्दछन् । पछिल्ला दिनमा गुगलले आफ्नो अपरेटिंग सिस्टममा कैयौं परिवर्तन गरिसकेको छ ।
अचेल एंड्रोइड ६.० मार्समेलो भन्दा माथिको एंड्रोइड भर्सनमा इनबिल्ट इनक्रिप्ट अप्सन राखिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फोन इनक्रिप्ट गरे काम भैगो । तर त्यस मुनिका एंड्रोइड भर्सनमा भने म्यानुअली इनक्रिप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा हाम्रो विवरण अर्काको हातमा जाने संभावना रहन्छ ।
यसका लागि फोनको सेटिंग भित्र गएर सेक्युरिटी अप्सन छनौट गर्ने र इनक्रिप्ट फोनमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय फोनहरूमा सेटिंग भित्र स्टोरेज अप्सन छानेर त्यसभित्र स्टोरेज इनक्रिप्ट छान्नु पर्ने हुनसक्छ ।
साथै फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गर्दा पनि फोन अटो इनक्रिप्ट हुने गर्दछ ।